Madaxweynaha dalka oo aan la kulmi doonin Kenyaanka ku nool Maraykanka – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo aan la kulmi doonin Kenyaanka ku nool Maraykanka
Safiirka dowlada Kenya ee Maraykanka Ambasadoor Robinson Njeru Githae ayaa sheegay in jadwalka madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ciriiri ah awgeed uusan fursad buuxda u heli doonin inuu la kulmo kenyaanka halkaasi ku nool.
Wareysi gaar ah oo uu siiyay Nation, ayuu Mr. Githae ku sheegay in safaaradda Kenya ee ku taallo Maraykanka aysan u suuragelin inay sii qorsheyso shir uu Mr. Kenyatta la qaadan karo muwaadiniinta qurbajoogta ah.
Mr. Githae ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha mudada kooban ee uu ku suganyahay Washington uu inta badan wadahadalo la yeelanayo dhigiisa wadankaasi Donald Trump.
Safiirka Kenya ee Maraykanka ayaa sido kale sheegay in Mr. Kenyatta uu ka qoomameynayo arrin uu aad u jeclaa hasa ahaate uusan waqtigu u saamaxeynin.
Anthony Muhuna, oo ah kenyaan ku nool gobolka, Maryland ee Maraykanka ayaa sheegay inuu doonayay in Mr. Kenyatta uu su’aal ka weydiiyo kulankii uu 9-kii bishii saddexaad ee sannadkan la yeeshay hoggaamiyaha mucaaradka Nasa, Raila Odinga.
Hoggaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa berri oo isniin ah la filaya inuu aqalka cad ee Maraykanka kula kulmo dhigiisa wadankaasi Donald Trump oo casumaad u fidiyay.
Galinkii dambe ee shalay ayuu Mr. Kenyatta oo ay wehelinayaan marwada koowaad Mrs. Margaret iyo mas’uuliyiin kale gaaray Maraykanka.
Mr. Kenyatta ayaa sido kale inta uu Maraykanka ku suganyahay kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda shirkado dalkaasi laga leeyahay.
Bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalka ee State House ayaa lagu sheegay in hoggaamiyaha ugu sareeya Kenya uu maalagatashatada Maraykanka kala hadli doono sidii ganacsiyo ballaran ay uga sameyn lahayeen gudaha wadanka.
Afhayeenka madaxtooyada wadanka, Kanze Dena ayaa sheegtay in Mr. Kenyatta iyo Mr. Trump ay wadahadaladooda diirradda ku saari doonaan arrimaha amniga, maamul wanaaga, ganacsiga, maalgashiga , iskaashiga gobolka iyo qodobo caalami ah.
Wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Dr. Monica Juma ayaa sheegtay in safarka uu madaxweynaha ku tagay Maraykanka uu muhimad gaar ah u leeyahay dalka.
Dr. Juma ayaa sheegtay in labada mas’uul ay sido kale ka wada hadli doonaan sida lagu sii xoojin karo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeya Kenya iyo Maraykanka iyo in sara loo qaado badeecooyinka loo dhoofiyo dalka dibadiisa.
Madaxweynaha ayaa safarkiisa Maraykanka kadib wadanka dib ugu soo laabanaya si uu u soo dhaweeyo ra’iisul wasaaraha ingiriiska, Theresa May oo imaanaysa 30-ka bishan sideedaad oo ku beegan maalinka arbacada ah.
← DHAGEYSO Guddoomiyaha Mombasa oo ku baaqay in dowlada lagu tageero la dagaalanka musuqmaasuqa
Turkiga oo 33 ceelasha biyaha ah ka sameeyay Zanzibar →